Uyitshisa njani iCD ngomculo okanye ividiyo kwikhompyuter yakho | Iindaba zeGajethi
Uyitshisa njani iCD ngomculo okanye ividiyo kwikhompyuter yakho
UPaco L Gutierrez | | ngokubanzi, Umfanekiso kunye nesandi, software
Njengoko besesitshilo kwi inqaku kwiiKhokelo zeTekhnoloji apho sibonise khona Ezona nkqubo zilungileyo zokuguqula iiCD zethu zomculo zibe yiMP3, ifomathi ebonakalayo iyafa kancinci kancinci. Kuya kusiba nzima ukufumana izixhobo ngenkxaso yeediski, imeko ngumxholo wedijithali. Kukhulu kangako, ukuba phantse akukho moto iza nenkxaso yediski, kwaye kwaneelaptops.
Amanqaku wentengiso ekusasazeni okanye kumxholo wokufunwa, apho iinkonzo ezinje ngeNetflix, iSpotify okanye iAmazon Prime ibonakala, eneenkonzo zomculo nezevidiyo. Kodwa ukuba singomnye wabo bafuna ukusebenzisa isishicileli sethu ukuba basebenzise ividiyo yethu okanye umculo wethu kwidiski, sineenkqubo ezifanelekileyo zokurekhoda ezi ngendlela elula kakhulu. Sifuna kuphela ikhomputha ene-disc burner okanye ukuthenga enye yangaphandle.
1 Yintoni esinokuyirekhoda kwaye yintoni?
2 Iinkqubo zokutshisa iidiski kwiWindows
2.2 UTYWALA 120%
2.4 Izixhobo zeDEMON Lite
2.5 Isidlali seMedia Media
3 Iinkqubo zokutshisa iidiski kwi-macOS
3.1 Ukutsha ukutshisa
Yintoni esinokuyirekhoda kwaye yintoni?
Singatsho ukuba bubugcisa obulibalekileyo, ngala maxesha apho sasihlala singqongwe ziidiski ezingenanto zilungele ukutshiswa kwikhompyuter yethu; kakhulu kangangokuba Kuyo nayiphi na ivenkile, nokuba incinci kangakanani, safumana iirekhodi zokuthenga; konke oku kubuyiselwe kwimvelaphi ngenxa yokusasaza okanye iinkonzo ezifunekayo njengoko besesitshilo.
Nangona kunjalo, ayikaze ibenzakalise enye indlela yokukhusela ii-discs zethu zomculo esizithandayo okanye iimuvi esifuna ukuqhubeka sizonwabela kodwa sigcine i-pristine yoqobo kwibhokisi yayo. Kulungile iinkqubo okanye iintetho esifuna ukuzithuthela kwiindawo apho singenakho ukufikelela kwikhompyuter kodwa kumdlali (into eqhubeka ngokungaqhelekanga). Siza kucebisa ngokukhetha iinkqubo zokurekhoda naluphi na uhlobo lwefayile kwiCD, iDVD okanye iBLU-RAY.
Iinkqubo zokutshisa iidiski kwiWindows
Yenye yeenkqubo ezindala, ezinonxibelelwano olufutshane kunye nokuphelelwa lixesha, kodwa inomdla kwaye ilula. Le nkqubo isivumela ukuba sibhale phantsi nantoni na esinokuyicinga, nokuba yeyiphi na ifomathi esiyifunayo kwaye eyona ilungileyo kuko konke kukuba isimahla.
Iyahambelana nayo nayiphi na inguqulelo yeWindows, ukusuka kwiWindows 95 ukuya kweyona ihlaziyiweyo Windows 10. Iyakusivumela ukuba sirekhode nayiphi na into ebonakalayo, nkqu neyona ingaqhelekanga njengefomathi esetyenziswa yiXBOX 360 (HD DVD).
Sinethuba lokuba siyitshise idiski, siqinisekise ngesoftware ukuqinisekisa ukuba i-100% ifundeka ngokupheleleyo nakowuphi na umfundi. Singabuguqula ubungakanani besixhobo okanye sibethele idiski yethu ngotyikityo lwedijithali.
Kule nto LINK sinokuzikhuphelela le nkqubo.
Inkqubo iphuhliswe ngenjongo yokuba lolona khetho lufanelekileyo lokudala ukuqhuba okanye imifanekiso yokwenza imifanekiso. Iyahambelana neefomathi ezininzi, kubandakanya: mds, iso, bwt, b5t, b6t, ccd, isz…. Ngaphandle kwamathandabuzo kuya kuba kufanelekile ukwenza iikopi zokulondoloza nantoni na esinokucinga ngayo. Umzekelo, sifuna ikopi yeCD ukufaka iiWindows; ngale nkqubo siza kuyenza kwimizuzu nje embalwa.
Ngotywala i-120%, yonke idiski eyakhiweyo ngumcimbi wamanyathelo ambalwa alula, athi ngawo ujongano olulula Nawuphi na umsebenzisi unokukwenza nokuba akanamava kangakanani.
Kule nto LINK singayikhuphela.
Enye inkqubo endala, enonxibelelwano oluthi, nangona luyinto yakudala kwaye imfutshane, icwangciswe kakuhle kangangokuba ilula kwaye inomdla. Naluphi na ulwimi luyafumaneka ke ulwimi aluyi kuba yingxaki kuye nawuphi na umsebenzisi. Inkqubo ijolise ekurekhodeni naluphi na uhlobo, sinokwenza udityaniso lweetrekhi kwi MP3, AAC, WAV, FLAC okanye ALAC.
Nangona into esinokuyenza kukukopa iifayile ngokungathi kukuqhuba kwePen. Konke oku kunokwenziwa ngeeCD kunye neeDVD. Iyahambelana nazo zonke iinguqulelo zeWindows ukusuka ngo-2000, XP ukuya kwiWindows 10. Inomdlali odityanisiweyo, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo ayizukuba kukusetyenziswa esikunikayo, kodwa ikhona.
Izixhobo zeDEMON Lite
Yinkqubo yokugqwesa kwepro "Abadali" yomxholo. Owona msebenzi uphambili kukungatshisi iidiski zomsindo okanye ividiyo, kodwa endaweni yoko ijolise ekudaleni imifanekiso ebonakalayo, njenge-ISO. Kuzo zonke esizithumele ukuza kuthi ga ngoku, ngokungathandabuzekiyo yeyona inandipha olona manyano lwanamhlanje, ndingathi kulo lonke uluhlu, kodwa ngokulinganayo kwaye ngokulula.
Masithi le nkqubo yile Eyona ilungele ukurekhodwa, umzekelo, imidlalo yevidiyo okanye imovie, zombini kwiDVD nakwiBlu-RAY. Isivumela ukuba siyenze ngokwamaqela ahlukeneyo xa kukho imfuneko. Inguqulelo yasimahla iqulethe intengiso, kodwa lixabiso lokuhlawula ukuba asifuni ukuhlawula imali epokothweni. Nangona sinokukhetha ukuthenga ifayile ye- ilayisenisi yobomi obungenamkhawulo nge- € 4,99 kuphela, eya kuthi isinike ithuba lokuyifaka kwiikhompyuter ezi-3.
Singayikhuphela le nkqubo kule LINK.
Isidlali seMedia Media
Ewe singayitshisa idiski yomculo ngaphandle kokufaka nantoni na kwikhompyuter yethu ukuba uneWindows oyifakileyo. Ukusuka kwiWindows XP ukuya kwi-10, Lo ngumsebenzi oluncedo oza neWindows Media Player.
Akuthandabuzeki Lukhetho kwabo bafuna kuphela ukurekhoda i-CD yomculo engaqhelekanga. Kuba oku kuncinci kakhulu kwaye akuniki nketho yokurekhoda, nangona isebenza ngokugqibeleleyo kwaye umgangatho wekopi ulunge kakhulu. Eyona nto ilunge kakhulu, akuyi kufuneka senze naluphi na ufakelo olongezelelekileyo okanye ukukhuphela.
Iinkqubo zokutshisa iidiski kwi-macOS
Abo basebenzisa iimveliso zeapile banelungelo lokutshisa ii-discs zethu, ke ngoko siza kunika ezinye iindlela zokuzenza kwinkqubo yokusebenza ye-macOS. Uhlobo olwahlukileyo alunabunzulu kodwa sinokuzonwabisa ngokhetho olulungileyo njengolo sinalo kwiWindows.
Siqala ngento eyenzelwe mna olona khetho; Igama layo, njengoko libonisa, libhekisa kwisantya sayo, ke sijongana nenkqubo esivumela ukuba irekhode ii-discs ngesantya esiphezulu kune-avareji, nangona Sinenketho yokuzirekhoda ngesantya esisezantsi ukuqinisekisa eyona mgangatho ubalaseleyo kunokwenzeka.
Sijongene nolunye lwezona zicelo zigqibeleleyo kuluhlu lonke. Singarekhoda ividiyo kwi-AVI okanye kwi-MPG. Yenza ulawule iilayibrari zeDVD uze uguqule iitemplate zemenyu zokuhambisa. Singongeza ii-watermark kushicilelo lwethu, sinokubanakho nokurekhoda iifayile zevidiyo kwiPAL okanye kwi-NTSC, kunye nokutshintsha umlinganiso wezinto kwizikrini zepanoramic.
Yinkqubo elula njengoko igama layo libonisa. Zitshise zombini iiCD neeDVD. Ibaleka kuyo nayiphi na ingxelo yenkqubo yokusebenza evela IMacOS X njengaseCatalina. Isivumela ukuba sitshise iidiski zoovimba, iidiski zomculo, senze ukusebenzisana okungaphantsi, ukuphinda ii-discs nokunye okuninzi.
Yinkqubo elula kakhulu ukuyisebenzisa kunye nesinxibelelanisi njengobuhlobo njengoko ilula kwaye incinci. Icala elisezantsi kuphela esilifumana kule software kukuba xa kutshiswa iDVD kufuneka ukuba ifomathi yevidiyo ibe .mpg. Ayisiyongxaki inkulu xa ucinga ukuba inkqubo iguqula ngokuzenzekelayo iifayile kwi .mpg; Nangona oku kuya kufuneka silinde ithutyana ngelixa uguquko lwenziwa ngaphambi kokurekhoda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyitshisa njani iCD ngomculo okanye ividiyo kwikhompyuter yakho
Kutheni le nto i-Epublibre ingasebenzi? Jonga ezinye iindlela
Uvavanyo lwe-AUKEY EP T25 yoLungiso